Nampiseho miharihary ny fijalian’ny vondrom-piarahamonina Ahwazi vitsy an’isa ao Iran ny fahafatesan’ny zazalahy iray 12 taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2018 18:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, Italiano, русский, English
Ankizy Ahwazi mandeha an-tongotra eny amoron'ny tatatra. Ny zazalahy 12 taona no niharam-boina farany noho ny fahantrana sy ny tolona ao Ahwaz. Sary: Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0
Zazalahy Ahwazi 12 taona, no voalaza fa maty namono tena tamin'ny takarivan'ny 24 Jolay 2018, tao amin'ny Repoblikan'i Iran ka niteraka fahatezerana noho ny fanavakavahana sy ny fahasahiranana atrehan'ny mponina Ahawzi vitsy an'isa ao amin'ny firenena.
Mitombo hatrany eo anivon'ny Ahwazi , vondrom-piarahamonina Arabo iray monina any amin'ny faritany manankarena solitany sy arintany any atsimon'i Iran ary mandrafitra ny 10 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena, ny tahan'ny famonoan-tena sy ny trangam-pandoroan-tena dia . Raha nosokajiana ho olona ambany noho ny foko niaviany, miaina ao ambany tokonan'ny fahantrana ny ankamaroan'ny Ahwazis, voafetra eo amin'ny sehatry ny fahazoana asa, fampianarana, fitsaboana, sy ny zavatra ilainy andavanandro na tsy mahazo izany mihitsy aza.
Nody tany an-tranony tany Abadan, any amin'ny faritanin'i Khuzestan, ny renin'ilay zazalahy, izay fantatra fotsiny amin'ny fanondroana hoe Meysam, ny Talata hariva ary nahita fa nananton-tena ny zananilahy 12 taona. Ity zazalahy ity no lahimatoa tamin'ny zanany roa, zazavavy dimy taona ny iray.
Niasa ho mpanampy an-trano sy mpanadio trano ary niady mafy mba hamelomana ny tenany sy ny zanany ity renim-pianakaviana, izay hany mpamelona ny tokantrano ity. Araka ny voalazan'ireo mpikatroka, namidin'ilay vehivavy ny sasany tamin'ny fananana kelin'ny fianakaviana, anisan'izany ny finday sy ny bisikiletan'ny zanany lahy, mba handoavana ny hofan-trano lafo fotoana fohy talohan'ny nahafatesan'ny zanany lahy.
Ny famonoan-tena nataon'i Meysam no tranga mampalahelo farany indrindra niseho teo amin'ny vondrom-piarahamonina Arabo Ahwazi. Tao anatin'izay roa taona lasa izay dia maro tamin'ireo tanora Arabo Ahwazi no nanao fanoherana tamin'ny alalan'ny fandoroan-tena ho famonoan-tena, matetika izany no mitranga eo anoloan'ny foiben'ny orinasa mpamokatra solika na ny biraon'ny governemanta.
Tao anatin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny mpanara-maso Ahwaz tamin'ny volana Aprily 2017, nisaintsaina ny antony ao ambadik'ireny tranga ireny i Karim Khalaf Dohimi, mpikatroka Ahwazi:
Niakatra be ny tahan'ny famonoan-tena manerana an'i Al-Ahwaz noho ny fahantrana sy ny haavon'ny tsy fananan'asa ary koa ny fanakatonana ny tsena malalaka ho an'i Ahwazi Arabo izay nitarika ny tanora Ahwazi ary indrindra indrindra ireo izay manambady hamono tena. Nitombo tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Ahwaz ihany koa ny fikasana hamono tena satria mijaly noho ny fahantrana sy ny fidiram-bola ambany ny 90 isanjaton'ny mponina Arabo Ahwazi any ambanivohitra. Miankina betsaka amin'ny fambolena sy ny fanjonoana ny fihinanan'ireo mponina kanefa nalain'ireo manampahefan'ny fitondrana an-keriny tamin'ny onitra farany ambany ny tanimbolin'izy ireo iray manontolo any amoron'ny reniranon'i Karoon izay hany fidiram-bola ho azy ireo.
Misy anefa ny krizy ara-toekarena mitranga manerana an'i Iran, ary misy ny fiakaran'ny famonoan-tena manerana ny firenena amin'ny ankapobeny. Araka ny voalazan'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana (OMS), sy ny fanadihadiana isankarazany natao tao Iran araka ny notaterin'ny sampam-baovao Iraniana toy ny Iranian Labour News Agency (ILNA), dia nitombo ny tahan'ny famonoan-tena ao Iran. Tamin'ny taona 2014, nitatitra ny OMS fa Iraniana 5,3 amin'ireo 100.000 no namono tena.
Tao amin'ny media sosialy, ho setrin'ny vaovao henjana dia nanamarika ny toe-piainana mampalahelo ao amin'ny firenena ny Iraniana iray manoloana ny famonoan-tena nataon'i Meysam, sy ny fahafatesan'ny zazalahy Ahwazi 17 taona iray hafa sy ny tovovavy iray hafa 15 taona avy ao an-tanàndehibe Arabo anjakan'i Iran.
Ny Repoblika Islamikan'i Iran tao anatin'ny herinandro
Ny famonoan-tenan'ny zazalahy 12 taona avy any Abadan
Ny famonoan-tenan'ny zazalahy 17 taona avy any Ahwaz
Ny tovovavy 15 taona avy ao an-tanàndehiben'i al-Ghadir
+ samy namono tena izy 3 noho ny fiadiana amin'ny fiainana. Inona no teny filamatra nisy talohan'ny taona 1979, ary 40 taona taty aoriana? #lasa_miombona
Ao Ahwaz, nanjary loharanom-pijaliana ho an'ny vahoakany ny harena voajanahary ao amin'ny faritra. Etsy ankilany, ny Ahwazi no tena lasibatry ny fandotoana tontolo iainana vokatry ny asa fitrandrahana solika sy arintany; etsy andaniny anefa dia hanamafisana ny fitaovam-piarovan'ny manampahefana ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana ao amin'ny faritra, fa ampiasaina hamoretana ny fanoherana rehetra ao amin'ny faritra.
Ny faharerahan-tsaina tsy voatsabo no antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena . Azo tsaboina ny faharerahan-tsaina ary azo sorohana ny famonoan-tena. Afaka mahazo fanampiana avy amin'ny fanohanana tsiambaratelo manoloana ny famonoan-tena sy ho an'ny ireo krizy ara-pihetseham-po ianao. Tsidiho ny Befrienders.org raha hijery ny fanampiana momba ny fisorohana ny famonoan-tena any amin'ny firenenao.